Nin loo diidey inuu nool yahay‏
Findley,USA, 18 Jan 2015 (Alldhooftinle.com)
Nin Nool Oo Soconaya Oo Doodaya Oo Loo Diidan Yahay Inuu Nool Yahay.
Donald Miller oo ku nool magaalada Findley ee dalka Maraykanka ayaa bishii hore maxkamadi ka diidey inuu nool yahay. Ninkan oo 61 jir ayaa arintiisu bilaabatay 1994 markaas oo la xukumay inaanu nooleyn markii muuqiisa la waayey mudo sideed sanadood ah. Haweeney ay kala tageen iyo waalidkiis ayaa isku raacay inuu dhintay ka dib markii ay ka quusteen inay helaan.
Sanadkii la soo dhaafay ayuu soo baxay isagoo ku dacwoonaya inuu nool yahay, una baahan yahay in la siiyo liisankii gaadhiga iyo waraaqii aqoonsiga, laakiin xaakimkii maxkamada ayaa u sheegay inuu sharci ahaan dhintay, in la soo nooleeyana aanay macquul ahayn sababtoo ah sharciga Maraykanka waxaa dhimashada ambiil laga qaadan karaa 3 sanadood gudahood.
Wuxuu kaloo xaakimku sheegay in hadii la dhaafo sadex sano aan la bedeli karin shahaadada dhimashada sidaa darteedna aan sinaba loo soo nooleyn kareyn ninkan odayga ah. Naagta uu qabi jirey oo u dhashay laba caruur ah ayaa iyana kasoo horjeeda in la soo nooleeyo odaygeedii hore. Waxay ku dooday inuu ka dhuuntay caruurtiisa si aanu caawimaad u siin, waxay kaloo sheegtay in aanay bixin kareyn lacag dowladu ku caawin jirtey oo dhimashadiisa lagu siinayey.
Odaygan baryaya in la soo nooleeyo ayaa ku dacwoonaya inuu wareeray isla markaana sakhraan noqday aan dunidaba war ka hayn, sidaa darteedna ay qalad tahay in dhimasho loo qoro qof aan la ogeyn meel uu jiro. Wuxuuna sheegay inuu dacwada wadayo ilaa inta loo ogalaanayo inuu nool yahay.
Abraar Bin Jacfar AlMakhzuumi